१५ औं आहा रारा गोल्डकप उपाधि: सहारा कि मनाङ ? – Khel Dainik
१५ औं आहा रारा गोल्डकप उपाधि: सहारा कि मनाङ ?
माघ १४, २०७३ | (PostaComment)
रञ्जन अधिकारी पोखरा, १४ माघ / ‘मनाङको होम ग्राउण्ड कुन हो ? भन्दा हामी पोखरा नै हो भन्छौं ।’ टोलीका प्रशिक्षक छिरिङ लोप्साङ गुरुङले पत्रकारमाझ भने – ‘आयोजकको घरेलु मैदान त पक्कै हो तर हाम्रो पनि होम ग्राउण्ड नै हो । त्यसैले प्रेसर छैन ।’ आडैमा रहेका सहाराका प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले पनि घरेलु मैदानको फाइदा उठाउन सहारा तयार रहेको बताए ।
१५ औं संस्करणको आहा रारा गोल्डकप उपाधि भिडन्तको अघिल्लो दिन शुक्रबार प्रि–म्याच कन्फरेन्समा पोखरा रंगशालामा सँगै उपस्थित भएका दुवै टोलीका प्रशिक्षक र टिम क्याप्टेनले एक अर्कोलाई कम नआँक्ने बताए । तर जित भने आफ्नै पक्षमा रहने उनीहरुको दाबी थियो । मनाङ पाँचौ पटक उपाधि उचाल्दै ईतिहास रच्ने दाउमा छ भने सहारा दोस्रो पटक उपाधि उम्कन नदिने रणनीतिमा छ ।
मनाङ प्रशिक्षक गुरुङले टिममा राष्ट्रिय खेलाडीको बाहुल्यता रहेकाले पनि जितको आधार बलियो भएको तर्क गरे । ‘विपक्षी टिम राम्रै छ । राम्रो भएर नै फाईनल आईपुगेको हो । हाम्रो पनि सेट टीम हो । राष्ट्रिय खेलाडी पनि धेरै छ ।’ उनले भने ‘पहिलो १० मिनेटमै गोल गर्न सके स्कोर राम्रो गर्न सक्छौं । चर्चित र ट्रेडमार्कको कारण पनि मनाङको मनोबल उच्च छ ।’
मनाङका टिम क्याप्टेन अनिल गुरुङले फाइनल खेलका लागि कुनै दबाब नरहेको बताए । उनले भने– ‘प्रेसर लिएका छैनौं । फाइनल भएकाले फाईनल जस्तो गेम खेल्छौं । जसले राम्रो खेल्छ उसले जित्छ ।’ कप्तान अनिल पोखरेली हुन् र पोखराका अधिकांश फुटबलप्रेमीको साथ मनाङलाई नै रहेकाले उसले घरेलु मैदान नै सोचेर मैदान उत्रन लागेको हो ।
सहाराका प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले मनाङ बलियो टिम भएपनि जितको रणनीतिका साथ खेल्ने बताए । राष्ट्रिय खेलाडी र विदेशी खेलाडीको कारण विपक्षी बलियो भएपनि नआत्तिईकन अनुशाषित तबरले खेलाडीको प्रदर्शन रहने भएकाले जित्नेमा आफू ढुक्क रहेको बताए ।
क्याराभान सहित १६ पटकको प्रतियोगितामा मनाङले आयोजकसँग यसअघि छ पटक सामना गरेको छ । दुई पटक मात्र सहाराले जितेको छ । फाईनलमा एक पटक मात्र भेट भएकोमा १२ औं संस्करणमा सहाराले मनाङलाई १–० ले स्तब्ध पार्दै च्याम्पियन बनेको थियो । त्यसअघि ११ औं संस्करणको उपाधि होडमा थ्रिस्टरसँग पराजित हुदै सहारा उपविजेतामा सिमित रहँदा फाईनल यात्रा मनाङलाई नै टाईब्रेकरमा पराजित गर्दै तय गरेको थियो ।
नवौं संस्करणमा मनाङसँग सहारा सेमिफाईनलमा ४–०, तेस्रो संस्करणमा सहारा रातो सेमिफाईनलमै ३–१, दोस्रो संस्करणमा सहारा रातो सेमिफाईनलमै ३–२ र क्याराभान गोल्डकपमा क्वार्टरफाईनलमा सहारा सेतो ३–१ ले पराजित भएको थियो ।
क्याराभान सहित सबैभन्दा बढि १० पटक फाईनल पुगेको मनाङले चार पटक उपाधि जितिसकेको छ। उसले दोस्रो, तेस्रो, १० औं र १४ औं संस्करणको उपाधि उचालेको हो । मनाङ छैटौं र सातौं संस्करणमा पोखरा आएन । क्याराभान सहित पुलिसले पाँच पटक उपाधि जितेको छ । आहामा अहिले सम्म नौ टोलीले मात्र फाइनल खेलेका छन् । चार पटक फाइनल खेलको थ्री स्टार चारै पटक च्याम्पियन बनेर फर्केको छ । त्यस्तै अर्को विभागिय टोली आर्मी भने तीन पटक फाईनल खेल्यो तर उपाधि जित्न सकेन अफ्रिकन युनाइटेडले एकपटक फाईनल खेलेकोमा उपाधि नै जित्यो भने एपिएफ, जावलाखेल युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लबले पनि एक पटक फाईनल खेलको अनुभव बटुलेका छन् ।
जारी प्रतियोगितामा सहाराले पहिलो खेलबाहेक टाईब्रेकरमै नतिजा निकालेर संघर्षपूर्ण जितका साथ फाइनलको यात्रा तय गरेको थियो । मनाङलाई पनि सेमिफाइनल पार गर्न कठिन भयो । सहाराले पहिलो चरणमा सुदुरपश्चिमलाई ४–० ले सहजै हराउँदै क्वार्टरफाइनल पुगेको थियो भने त्यसपछि सिक्किम युनाइटेड र आर्मीलाई हराउन टाइब्रेकरसम्म कुर्नु परेको थियो । उता सिधै क्वार्टरफाइनल खेलेको मनाङले धरान फुटबल क्लबमाथि ४–१ ले सजिलै जित निकाल्न सफल भएपनि सेमिफाइनलमा संकटाविरुद्ध १–० गोलको कठिन जित थियो ।
राष्ट्रिय लिगमा तेस्रो भएको भएको साविक विजेता मनाङले गत वर्ष आहारारा गोल्डकप सहित बुढासुब्बा गोल्डकपको उपाधि पनि जितेको थियो । सहारा भने खेलाडीहरु टिपनटापन गरेर कहिलेकाहिँ विभिन्न प्रतियोगिता खेल्दै आएको छ ।
सहाराबाट मानबहादुर र हेमन
राष्ट्रिय टोलीका हेमन गुरुङ र मानबहादुर तामाङ प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्तमा आयोजक सहारा क्लबबाट खेल्दैछन् ।
सहाराका प्रशिक्षक किरणले श्रेष्ठले हेमन र मानबहादुर खेल्ने जानकारी दिएका हुन्। यी दुई खेलाडीलाई पहिलो खेलबाटै उतार्ने प्रयास भने बल्ल सफल भएको छ । सहाराका बबी ओगोला ओडोंगोले आमी विरुद्धको खेलमा रातो कार्ड पाएपछि सहाराले अर्को खेलाडी राख्ने पूर्वानुमान थियो ।
हिमालयन शेर्पामा आबद्ध यी दुई खेलाडीले गत सिजन एपिएफबाट खेलेका थिए। मानबहादुर सहारा एकेडेमीकै उत्पादन हुन्। हेमन पोखराबासी हुन्। बंगबन्धु, साग र एएफसी सोलिडारीटी कप जित्दा हेमन तीनै पटक राष्ट्रिय टोलीका सदस्य थिए भने मानबहादुर बंगबन्धु र सागमा टोलीमा थिए ।
← प्रधान सेनापति राष्ट्रिय भलिबल: एपीएफलाई स्तब्ध पार्दै पश्चिमाञ्चल तेस्रो हङकङ र नेपाली तेक्वान्दो टोलीको संयुक्त प्रशिक्षण →
महिला लिग छनौटको पहिलो दिन नै गोलको बर्षा माघ १४, २०७३
गणेशमान सिंह राष्ट्रिय टेनिस ९ गते देखि माघ १४, २०७३
बिदाई कार्यक्रममा खेलाडी नआएपछि… माघ १४, २०७३
मनाङले ल्यायो पोर्चुगिज खेलाडी माघ १४, २०७३
अझै सुध्रिएन नेपालको फिफा वरियता माघ १४, २०७३
प्रशिक्षक अब्दुलाको सम्झौता नवीकरण हुने सम्भावना बलियो माघ १४, २०७३